Njodzi Njodzi YeOmicron Kutyisidzira: Kushanya kweHawaii Kunoparara mukati memazuva? | Hawaii
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Hawaii » Njodzi Njodzi YeOmicron Kutyisidzira: Kushanya kweHawaii Kunoparara mukati memazuva?
Kuputsa Kufamba Nhau • Nyika | Dunhu • Enda • Hurumende Nhau • Hawaii • utano • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • USA • WTN
Njodzi Njodzi YeOmicron Kutyisidzira: Kushanya kweHawaii Kunoparara mukati memazuva?
Iyo Hawaiʻi Pandemic Applied Modelling Work Group (HiPAM), boka revashandisi vechirwere chechirwere, masayendisiti edata, vashandi vehutano, uye nyanzvi dzinopa rubatsiro kuHurumende yeHawaii kugadzirisa matambudziko anotyisa anokonzerwa nedenda iri. HiPAM yakazvipira kugadzirisa maturusi anozivisa kuita sarudzo uye kuronga iyo account yeHawaiʻi yakasarudzika mamiriro.
Iyo Omicron COVID Outlook yeHawaii hapana chinhu chakaderera pane njodzi uye inokatyamadza!
Chirevo chakawanikwa pa HiPAM webhusaiti.
Munguva yakaipisisa nguva yeCCIDID-19 denda, zana nyowani dzekesi mu Aloha State yakakonzera kuvharika kwenyika. Kusvika Zvita 11 100 nyaya nyowani dzezuva nezuva dzainetsa asi dzakaenderera kwechinguva. Zvitoro, maresitorendi, makirabhu ehusiku akaramba akavhurika.
Nekuunzwa kweOmicron kunosvika Zvita 11, nhamba nyowani dzehutachiona pachitsuwa cheOahu dzakatanga kusadzora. Nezvirwere zvitsva zvinodarika mazana masere nhasi HiPAM yaitarisira kuti nhamba dzakadayi dzisimukire nenzira iyo 800th State State inganzi haichadzoreki kana zvasvika kuCOVID-50.
Pakazosvika Zvita 31 nhamba dzakadai dzehutachiona hutsva hwemazuva ese hunogona kuenda pamusoro pe2000 pazuva paZuva reGore Idzva uye hunogona kukwira zviuru gumi nezvishanu zvehutachiona hwemazuva ese munzvimbo yevagari vasingasviki miriyoni imwe chete nemazana mashanu gare gare muna Ndira.
Ndege nemahotera zvakarongerwa kuti zvigamuchire vashanyi vanobva kumativi ese enyika nepasirese kuzororo riri kuuya.
Nemibhedha makumi matatu nemana yechipatara iri kushandiswa kuzvirwere zveCOVID muna Zvita 34, nhamba iyi inofanirwa kukwira kusvika mazana matatu nemakumi manomwe pakupera kwegore, izvo zvingave zvakapetwa kagumi nhamba dziripo. 11 mibhedha yeICU inogona kutarisirwa kushandiswa kupera kwemwedzi uno, zvichienzaniswa ne370 muna Zvita 10.
Huwandu hwevanhu vafa huri kutarisirwa kukwira kubva muna 1018 kubva pakatanga denda muna Kurume 2020 kusvika pa1113 mukupera kwemwedzi uno. Ndisingazive kuti iyo Omicron itsva inouraya sei, kufanotaura kunogona kuipa kwaNdira.
Maererano neshumo ichangobva kuburitswa muchipatara cheCivil Beat inogona kusvika mazana masere muna Ndira, uye 800 muna Kukadzi. Izvi zvingava njodzi. Nyanzvi dzinoti Hawaii haina vashandi, mibhedha, uye okisijeni yekubata kudiwa kwakadaro pahurongwa hwehutano.
Pamusoro pedenda, mazana mana evarwere veCOVID vaive muchipatara cheHawaii pazuva rakaipisisa. Panguva iyoyo vashandi vechipatara 404 vakaendeswa nendege vachibva kune dzimwe nyika dzeUnited States, uye matende ezvokurapa akaiswa.
Mukuburitswa kwenhau, HiPAM yakati inogona kuunza fungidziro iri nani uye yakanyatsojeka kana vakuru vezvehutano vakaburitsa dhata rekuti vangani venyaya nyowani dzeCovid nevarwere vari muchipatara vakabayiwa.
Hazvina kujeka kuti ingani nyaya muHawaii inogona kupihwa kune iyo Delta vhezheni kana Omicron.
HiPAM iri kufungidzira kuti omicron iri kutyaira yakakura yeazvino Covid kuvhiya, sekureva kweCivil Beat report.
Zvinoenderana neshumo Hawaii ine maventilator akakwana kubata mazana masere evarwere veCOVID-800, asi hapana Oxygen yakakwana muHurumende. Okisijeni haigone kufambiswa mukati, nekuti zvine njodzi kutakurwa mundege. Okisijeni inofanira kutumirwa nekutakura zvinhu zvemugungwa. Hapasisina nguva yekufambisa izvi.
Parizvino Gavhuna weHawaii Ige haana kuzivisa zvirambidzo, uye vashanyi vari kusvika nenhamba huru, kunyanya kuzororo reKisimusi neGore Nyowani riri kuuya. Nhasi nhanho yenjodzi yeCOVID muHawaii yakasimudzwa kusvika yakakwira zvakanyanya.
kisimusi Covid Covid-19 Hawaii Zuva reGore Idzva Oahu ushanyi
UK Piel Island: Mambo mutsva anodiwa
A New Accor Brand inovhura muAustralia
Lufthansa inomutsa Airbus A380 zvakare
St. John's kuToronto, Edmonton neCalgary...
Chiitiko Tech Inotonga zuva paIMEX muFrankfurt
Historic Bridgetown Barbados: Yakakodzera rwendo pachayo
Kufamba kwechirimo kuchisundidzira vashandi vendege kumucheto
Kupisa Zhizha Kumberi kune Vafambi veUS
Delta Inotangisazve Nostop Flights kubva kuAtlanta kuenda kuCentral...
IATA Diversity & Inclusion Awards vakahwina...